Ọ bụrụ na ibidola n'okporo ụzọ ịmepụta ebe ị na-achọ onye editọ ederede nke bụ ihe-ị-hụ-bụ-ihe-ị ga-enweta (WYSISYG), ị maara otú o si sie ike. Mgbe m na-arụ ọrụ na onye na-eweta ọrụ email, ọrụ ịzụlite ma nwalee onye editọ nke na-arụ ọrụ iji nyeghachi nzaghachi, email-ahịa email HTML were ndị mmepe ọtụtụ mbipụta iji tọọ ma dozie. Ọ dịghị mfe.
Ihe ndezi ederede bụ otu n'ime ihe ndị ahụ ịchọrọ ịmịnye na ikpo okwu nke na-eme ka ọdịnaya dịwanye mma, mana ekwesighi ịchọ ọnwa ma ọ bụ afọ nke mmepe. Onye ndezi Froala bụ editọ na-enwu ọkụ na-enwusi ọkụ nke na-adị fechaa, nke ọma ahaziri, echebe, ma dịkwa mfe maka otu mmepe gị iji tinye aka n'ime na-ewu ewu frameworks.
Ogwe Ngwaọrụ - Ọtụtụ bọtịnụ? Ikekwe ọ bụghị n'usoro ziri ezi? I nwere ikike zuru oke na njikwa ogwe ihe nchịkọta akụkọ na nha ihuenyo ọ bụla.
Mmebi iwu - Ogwe ogwe ihe ederede ederede bara ụba ekwesịghị iji isi okwu na ibe weebụ gị jikọtara ya, weghachite ya.
Iframe - WYSIWYG HTML onye nchịkọta akụkọ nwere ike ịnọrọ iche na ibe ibe ya site na iji iframe yabụ enweghị ụdị ma ọ bụ esemokwu ederede.
Image Alt Tag Nkwado - Nhọrọ onyonyo bụ ederede egosiri ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị enweghị ike igosipụta onyonyo ahụ. Ọ bụkwa ederede ederede engines na-eji, yabụ elegharala ya anya. Enwere ike ịtọ ederede ọzọ na popup edit image.